Ko MK-677 (Ibutamoren) inoshanda zvakanaka Kune Musha Kuvaka? Kudzokorora Kwemoto
/Blog/garari/Ko MK-677 (Ibutamoren) inoshanda zvakanaka Kune Musha Kuvaka? Ongororo Yekutsamwa [2019 NEW]
Posted on 09 / 29 / 2019 by Dr. Patrick Young akanyora garari.
1. Chii chiri MK-677 (Ibutamoren)?
MK-677 (Ibutamoren) poda (159752-10-0) inyowani yekukura hormone siriagogue (GHS). Yekukura hachivande secretagogue yakakomberedzwa kuti ishandise secretsagogue kubatsira kuwedzera kukura kwehomoni mazinga. Kukura kwamahomoni kunodiwa kuti muviri wako ushande zvakanaka. Izvi zvakare zvinobatsira iwe kusimudzira tsandanyama muswe kukura.
MK-677 (Ibutamoren) poda hazvipindire nemamwe maitiro epanyama uye echisimba sekugadzirwa kwehomoni yechisikigo. Zvinorehwa izvi ndezvekuti iwe uchaona kuwedzera kwehomoni kukura pasina kusangana nemabatiro senge testosterone kudzvinyirira. MK 677 kuvaka kuvaka kwakawanda kwakawanda asi tichazokurukura ivo vese gare gare mune ino nyaya.
2. Nei MK-677 (Ibutamoren) ine zita rakasiyana?
Ibutameron inozivikanwawo se mk677 nutrobal, Ibutamoren Mesylate uye vamwe vanhu vanogona kuidana kuti MK 677 (Ibutamoren) poda pfuti. Mazita ese aya anoreva imwe yakafanana. Izvi zvinodaro nekuti vamwe vanhu vanotengesa sengeti sarm asi dzimwe nyanzvi dzinoti haisi yemhuri yemahombekombe.
Ibutamoren inotaridzwawo sechirevo chakakosha nekuti hazviwanzo kuwana mushonga uyo une simba rekusimudzira huwandu hwehomoni yekukura uye IGF-1 (Insulin-like kukura chinhu).
3. MK-677 (Ibutamoren) inoshanda sei?
MK-677 (Ibutamoren) poda (159752-10-0) nutrobal inoshanda nekuwedzera iyo secretion ye kukura mahormone (GH) uye kukura zvinhu-1 (IGF-1) .Zviri izvi zvinotevedzera mashandiro anoita ghrelin mahormoni. Ghrelin ihormone inoitika kana usati wambozviona.
Izvi zvinogonesa kusungira nyore nyore kune imwe yeakazvitsaurira GHSR (ghrelin receptors) yeuropi. Kamwe yakasimudzirwa, ghrelin receptors inobva yamutsa kukura kwehomoni kugadzirwa muuropi. Iyo inoshanda seyo neuropeptide mu CNS (yepakati mantha system). Hormoni iyi inozivikanwa potency yayo kukurudzira kuda kudya.
Iyo zvakare inoronga kugovera kwesimba mumuviri yedu uye inofurirawo nzira iyo muviri unochera mafuta mukati. Izvo zvinogona zvakare kukanganisa kugona kwemuviri kupora kubva mumamiriro ezvinhu sekufutisa uye Type Type yeshuga 2.
Kana ichishandiswa pachayo, mk 677 ine mukana wekuwedzera kugadzirwa kweHGH pasina kuvhiringidza chero imwezve hormone. Vazhinji veavo vanoitora vanorumbidza zvakare mk 677 supplement nekuti haimanikidzi huwandu hwazvino hwe testosterone uye kukura mahormone, iri bhonasi hombe kana iwe ukafunga nezve mabhenefiti.
4. MK-677 (Ibutamoren) Kubatsirwa
Kukura kweMuviri uye Kupora
Imwe yemakona makuru mk 677 inowanikwa ndeyekuvandudzwa kwemhasuru kukura uye kupora. Sezvo mk 677 yekuwedzera inowedzera IGF-1 uye GH mazinga ayo mushandisi anogona kuisa zvakanyanya kukura zviri nyore. Izvi zvave zvichitsigirwa nekutsvaga nesainzi. Kuongororwa kwakaitwa kwakaratidza kuwedzera kwakawanda mussle mass kunyanya muvanhu vane kukura kwehomoni kushomeka uye varume vakuru kunyanya 60 makore uye pamusoro. Vazhinji mk 677 wongororo kubva kuvashandisi vanotaurawo kuti uyu mushonga une mhedzisiro yakanaka pane kuvaka mhasuru dzemasumbu.
Sezvo zera remaronda, huwandu hwemapfupa hunoderera. Vazhinji vanhu vakuru vanonetsekana nekushaya simba pamapfupa uye pfupa rezvirwere zvichikonzera kushomeka kwekufamba uye kurwadziwa. Vamwe vana uye vakuru vechidiki vanogona kupfuura neizvi zvakare asi zvinogona kunge zvichikonzerwa nekuderera kwefupa. MK-677 poda inowedzera inomutsa kukura kwehormoni uye inosimudzira inodzoka pfupa. Ndiwo maitiro anoita mushonga kubatsira nekusimbisa mapfupa.
Inodzivirira Kushungurudza Muswe
Muchidzidzo chesainzi chakaitwa pane sere vanhu vanotsanya, Ibutamoren mk 677 akakwanisa kudzosera kuparadza tsandanyama uye kurasikirwa kweprotein. Kumwe kuongorora kwakaratidza kuti mushonga uyu wakabatsirawo varwere vakwegura avo vaive nemabhonzo ehudyu kuti vawane simba remutsipa uye zvirinani kuwana.
Kukura kwaTendon uye Kudzivirira
Anenge munhu wese anovaka muviri anoreurura kuti kukuvara kwakati kwakadzora kufambira mberi kwake nekuvavhara kunze kwejimu kwemazuva, kana kunyange mavhiki. Kana iwe ukaramba uchingopedza nguva yako yakawanda munzvimbo yekumhanyisa, kukuvara hakudzivisiki. Zvakare, kuwedzera kwekukurumidza kwemasuru musumbu kunokonzerwa kubva kumisangano yako yakaoma yekudzidzisa, kunogona kuisa kumanikidzwa kwakawanda pane ako matishu kusanganisira mapfupa anotungamira kukuvara.
Kana zvasvika pakugadziriswa kwema tendon akakuvara, ligaments uye mapfupa, kukura kwehormoni kwakakosha. Nekuwedzera huwandu hwehomoni yekukura, mk 677 inowedzera inovimbisa kuti tishu dzinobatana dzinogadziriswa nekuchengetwa zvine hutano zvakare. Uwandu hwemapfupa hwakagadziridzwa zvakanyanya uye nekudaro mapfupa ako anozoita musimba mukukugonesa kubata mhasuru. Nekuda kweizvozvo, iwe hauchazotongo kukuvara kune zvakajairika kukuvara.
Vazhinji vashandisi vanobvuma kuti mk677 yakavabatsira kurumidza kurasikirwa kwemafuta. Mk 677 kurasikirwa kwemafuta mhedzisiro zvakanzi zvinoshamisa pamwe nekuti GH ndiyo yega mahormoni ayo angakubatsira kupisa ese ari maviri anodzika uye mafuta e visceral paunenge uchikugonesa kukudziridza wakasendamira muswe misa. Semhedzisiro, Ibutamoren inogara ichiwedzerwa kune zvirongwa zvekudzora muviri.
Ganda riri nani, zvipikiri uye bvudzi
Iko kukura kwehomoni kwakaratidzwa kuve kunatsiridza masero eganda. Sezvo MK-677 inomutsa GH, ndosaka mushonga wacho uchikwanisa kumisikidza uye kugadzirisa zvakare kutaridzika kwebvudzi, zvipikiri uye ganda.
Imwe mk 677 kubatsirwa ndeyekuti inomutsa ghrelin receptor uye inogona kukonzera nootropic kukanganisa. Maererano nekutsvaga kwekutsvakisisa kwakaburitswa neNCBI kunogona kubatsira kusimudzira mashandiro ehuropi nekumanikidza maitiro maviri zvisina kunangana. Iyi michina inosanganisira kusimudzira IGF-1 inobatsira mukuvandudza kuchengetedza ndangariro uye kugona kudzidza. Uye, kuburikidza nekusimudzira mhando uye huwandu hweREM kurara. Kurara kwakakosha nekuti kuno chengetedza kwakaringana basa rekuziva.
Inodzivirira kukura kwehomoni kushomeka
Mk 677 inowedzera IGF-1, IGFBP-3, uye kukura kwehomoni mazinga muvana nekushomeka kwehomoni yekukura pasina chinja macontecolol, insulin prolactin, glucose, thyroxine (T4), thyrotropin kana triiodothyronine (T3).
Ibutamoren yakaratidza mhedzisiro yakafanana paGH -hurema varume, asi glucose uye insulin yakawedzera, zvakare.
Kukura mahormone kunowedzera kurapa uye kupora kwemashure, saka Mk 677 inobatsira neizvi nekuwedzera kukura kwemahormone. Izvi zvinotsigirwa nemishumo yevakavaka ma bodybuilders vakashandisa ibutamoren isati.
Vanhu vakashandisa MK-677 vasati vataura manzwiro ekusunungurwa kubva pamisango.
Wedzera Kuwedzera Chido
Kuve Ghrelin Mimetic iwe unofanirwa kutarisira kutora yakawanda yekudya iwe uri pasi peIbutamoren. Kunyangwe izvi zvichibatsira kana zvakashata zvinoenderana nezvinangwa zvako, iwe unofanirwa kunzwisisa kuti ndeimwe yeasina kukakavara mk 677 mhedzisiro.
Zvakakwana kugara zvakanaka
Ibutamoren inoshanda zvikuru mukusimbisa kusagadzikana kwedu uye kugara zvakanaka. Iko kugona kwemuviri wako kurwisa uye kugara kure nekuvhiringidzika kwemwaka uye allergies kunoitwa zvakanyanya. Unozotanga kurarama hupenyu hwakagadzikana huzere nerunyararo rwepfungwa.
5. MK-677 (Ibutamoren) kutenderera
Cycle 1: Kuti uwane iyo yakanakira MK 677 (Ibutamoren) poda inowanikwa, unofanirwa kutanga ne10mg paawa 24 maawa ekutanga e11 mavhiki ekushandisa usati wawedzera kune 20-25mg pa 24 maawa gare gare kutenderedza 12th vhiki. Izvi zvinogona kutorwa seyemvura, kana nemuromo kana ne capsule.
Cycle 2: Iwe unogona zvakare kutanga ne15mg paawa ma24 uye wedzera yako MK 677 kutenderera kutenderera kupfuura mavhiki 12. Nekuita kwakadaro, haufanire kunetseka nezvematambudziko neye pituitary gland yako kana zvimwe zvinokanganisa.
Cycle 3: Vazhinji vavaki vemuviri vanouya vachienda-kutenderera opts kuti vawedzere yavo MK 677 dosage ku50mg pazuva uye chengetedza iyo MK 677 kutenderera kwemavhiki masere.
Cycle 4: Kana iwe uchida kuvaka mesuru, vashandisi vanokurudzira kutora Ibutamoren dosage ye30mg maawa e24.
Cycle 5: Kana chinangwa chako chikuru ndechokubvisa mafuta, saka vashandisi vane ruzivo vanokurudzira kutora 20mg maawa e24.
Cycle 6: Kana chinangwa chako chikuru kupodza kukuvara, MK 677 dosage ye10-20mg pazuva inokurudzirwa zvikuru.
Nhau dzakanaka ndedzekuti iwe hauzodi PCT (Post Cycle Therapy) ye mk 677 sezvo isinga pindire nehomoni chero.
6. Ndeipi yakanyanya kunaka MK-677 (Ibutamoren) dosage?
Kutsvaga kwedu uye zvirevo kubva kuvashandisi vane ruzivo zvinoratidza kuti 20mg kusvika 30mg ndiyo yakanyanya kunaka MK 677 dosage. Vamwe vashandisi vakashuma kutora kupfuura 30mg ye ibutamoren pazuva, asi izvi hazvina kupa zvirinani mhinduro. MK 677 kutenderera kutenderera yakaratidza kuve yakakosha kudarika ibutamoren dosage.
Izvo zvakakosha kuti iwe utore ibutamoren kwenguva yakareba. Izvo mazinga ehormone ekukura anofanirwa kuvaka zvishoma nezvishoma mumuviri wako. Kuvakirwa zvishoma nezvishoma kwemahormone kunogona kutora kusvika kumavhiki mashoma usati watombotanga kunzwa mabudiro.
Chinangwa chako chinowedzerawo huwandu hwe mk 677 hwaunotora. Heano mishonga yakakurudzirwa yezvakasiyana zvinangwa.
Chivakwa chetsandanyama: 30mg pazuva
Kupererwa nemafuta: 20mg pazuva
Kuporesa kwekukuvara: 10-20mg pazuva
Kana usina kushandisa Ibutamoren poda (159752-10-0) zvisati zvaitika, zvinokurudzirwa kuti utange ne10mg kuti uone mapindiro anoita muviri wayo mazviri.
7. Ko MK-677 (Ibutamoren) Ine Mhedzisiro?
Mk-677 ine mashoma uye madiki madhiri mativi kana paine, uye kana akaitika anokwanisa nyore kurongeka. Heano mamwe emhedzisiro:
Nguva refu yekurara
Vamwe vashandisi vanogona kurara vasina kukanganiswa kweanenge maawa e12 mushure mekutora ibutamoren zvichikonzera kunzwa kuneta kwakawanda zuva rinotevera. Kana iwe ukasangana neizvi, iwe unofanirwa kuyera pasi padhosi kana kuipatsanura kaviri pazuva uye iyi MK 677 side effect ichaenda yega.
Kunyangwe zvingave zvisingaiti kune vese vashandisi, vamwe vashandisi vanowana nyoro mhasuru cramps pavanotora ibutamoren. Iyi MK 677 side effect inozopfekawo kana uchinge watomira kutora ibutamoren.
Iwe unogona zvakare kuona kuchengetwa kwemvura uye kuwedzera kudya asi izvi zvinowanzoitika kana iwe ukanyanya yakanyanya ibutamoren dosage. Mushure menguva yakati, zvese izvi zvinokanganisika zvichangoenda zvoga paunomira kutora mk 677.
8. Ndeipi hafu yehupenyu hweMK-677 (Ibutamoren)?
Mk 677 hafu yehupenyu inenge maawa e24. Zvinoreva izvi murondedzero ndeyekuti munhu anogona kutora rake zuva nezuva nguva imwe pazuva. Asi zvakawonekwa kuti kana iwe ukatora dhiini rimwe pazuva, iwo mahosi ekukura kwako mahormone anogona kutumbuka kamwechete.
Izvi zvinogona kuteverwa nekunzwa kuneta kana kupera simba. Izvi zvinogona kudzivirirwa nekukamura dosi rako muzvikamu zviviri pazuva ripi neripi kana kunwa doro uchangotanga kurara. Nekudaro, iwe unovata samambo uye zvigadzirwa zvako hazvingakanganiswi muzuva rinotevera.
9. MK-677 (Ibutamoren) Mhedzisiro
Izvo zvakanaka kutaura kuti Mk 677 inoguma pakuvaka muviri uye kumwe kushandiswa kwambotaurwa kwakanyanya. Ibutamoren inzvimbo inoshanda zvakanyanya kubvira inowedzera kuvaka mhasuru, uye zvakare kubatsira nekuvandudza ganda, bvudzi uye kupisa mafuta pamwe.
Vashandisi vakagovana Mk 677 nguva isati yatanga uye yapfuura mifananidzo uye zvawanikwa zvakaratidza kuti ibutamoren yakakwanisa kuchinja mashandiro emuviri yavo zvakanyanya. Ivo vakakwanisa kuwedzera huwandu hwakawanda hwetsandanyama vachirasikirwa nemamwe mafuta emuviri.
Kana ibutamoren inoshandiswa pamwe chete nemamwe mavakirwo emuviri SARM senge MK-2866 uye LGD-4033, iyo inokwanisa kuchinja muviri wako zvizere, ichipa pfungwa dzinopomhodza zvibodzwa. Iwe unofanirwa kucherechedzawo kuti iwe unofanirwa kushanda uye kuchengetedza kudya kwakakodzera kana iwe uchida kuwana iyo yakanakisa Ibutamoren poda (159752-10-0) yekuvaka muviri.
10. Ko MK-677 (Ibutamoren) FDA yakatenderwa?
Sezvo ibutamoren ichiri Investigational New Drug, haisati yatenderwa neFDA. Nekudaro, mk 677 yakave ichishandiswa muyedzo nedzimwe nyanzvi dzekuvaka munharaunda yekuvaka muviri vanobvuma kuti mushonga uyu wakachengeteka. Izvo zvakavewo zvakadzidzwa zvakanyanya nesainzi vanobvumawo kuti mushonga uyu unoshanda.
11. Ko MK-677 (Ibutamoren) yakachengeteka?
Ibutamoren yakachengeteka kana ikatorwa pamiyedzo yakakurudzirwa. Iyo inonyanya kuchengetedzeka zvakanyanya muvanhu vane hutano. Nekudaro, kana mushonga wacho ukatorwa mune yakakura dosi kupfuura yakakurudzirwa, vashandisi vanogona kusangana needema uye mhasuru cramps. Asi nei uchifanira kuda kutora yakakwirira dosi kupfuura yakakurudzirwa piritsi?
Zvakare, mashoma mhedzisiro yakaipa inogona kuve yakasangana inoderera yega kana iwe uchinge warega kushandisa Ibutamoren. Uyezve, zvinogoneka nyore kana uchishandisa mushonga.
12. Is MK-677 (Ibutamoren) zviri pamutemo kutenga?
Vanhu vazhinji vanobvunza, ari MK 677 yekutengesa? Kana iwe uri mumwe wavo, usanetseka, isu tichapindura uyu mubvunzo pano.
Parizvino, MK-677 poda (159752-10-0) inowanikwa chete kutengeswa semuti wekutsvagisa, saka zvinorema kuti, zvakaoma kuwana mushonga uyu kana uchiti unoda icho chinovaka muviri. Zvakangodaro, ruzhinji rwevakavaka muviri vanoti vari kurutenga kuti rutsvagidzirwe kushandisa chete kupa chikonzero chaicho kutenga kwavo. Usati wadzvanya kuti 'MK 677 tenga online' shuwa, ita shuwa kuti supporter yauri kutenga kubva zviri pamutemo uye zviri pamutemo. Iwe unofanirwa kuve nechokwadi chekuti iwe uri kutenga yakachena kwazvo fomu yemushonga nekuti iyo isina kuchena fomu yeutrobal inogona kuuya nemhedzisiro yakaipa.
13. MK-677 (Ibutamoren) Yekuvaka Muviri
Ibutamoren ichangobva kuve yakakurumbira mukurumbira munharaunda yekuvaka muviri. Chikonzero chikuru nei mk677 nutrobal iri kunyanyo shandiswa mukuvakwa kwemasuru ndeye chinangwa chekusimudzira mazinga eGH. Wese munhu ari mukuvaka muviri nguva dzose anotarisira kuve wakasarudzika uye mukuru.
Sezvo mahormone ekukura anoita basa rakakura mukuvakwa kwemuviri, ivo vanoda kuti ive munzvimbo dzakakwirira zvakanyanya sezvinobvira nekugara yakachengeteka. Iyo yakakwirira mazinga eea ​​kukura mahormone, anokurumidza uye nyore muvaki womuviri anokwanisa kuwedzera mamwe mhasuru.
Sezvo Kukura Mahormoni kuri kudhura zvakanyanya hapana mimwe mhinduro muhomwe-inosimudzira kukura kwehomoni, kunze kweNutrabol. Mk 677 nzira yakachipa yakawanda uchienzaniswa nayo HGH (Hormon Yekukura Kwevanhu) uye inogona kunyatsoshanda kuwedzera munhu kukura mahormoni pamwero wakakura.
Iwe unogona kuita MK-677 yakawanda kuwanda online. MK 677 yekutengesa inowanikwa zviri pamutemo semakemikari ekutsvaga. Iwe unozoona vazhinji vavaki vemuviri vanotenga ibutamoren uye vachiti ndeyekushandisa kwekutsvaga chete.
Izvo zvakakosha zvakare kuti iwe uzive kuti Nutrobal inogara yakarongedzwa ne SARM. Muenzaniso wakakwana mubatanidzwa weS23, MK-677, uye RAD140 (Testolone) powder.
US National Library yeMishonga, National Institutes of Health, Ralf Nass, Suzan S. Pezzoli, Mary Clancy Oliveri, James T. Patrie, Frank E. Harrell, Jr., Jody L. Clasey, Steven B. HeymsfieldMark A. Bach, Mary Lee Vance, naMichael O. Thorner, MB, BS, D.Sc, Mhedzisiro yeOral Ghrelin Mimetic pane Kuumbwa kweMuviri uye Mhedzisiro yeCinical muhutano hweVakuru Vakura: Muedzo Unorambidzwa, Unodzorwa.
Janssen I, Heymsfield SB, Wang Z, Ross R. Skeletal muswe muswe uye kugovera mu468 varume nevakadzi vane makore 18-88 yr. J Appl Physiol. 2000; 89: 81-88
Adunsky A., Chandler J., Heyden N., Lutkiewicz J., Scott BB, Berd Y. ,. . . Papanicolaou DA (2011). MK-0677 (ibutamoren mesylate) yekurapa kwevarwere vanopora kubva muhudyu kuputsika: multicenter, isina mukana, nzvimbo-yakadzorwa chikamu IIb kudzidza. Archives eGerontology uye Geriatrics, 53 (2), 183-189.
Mashandisiro Aungaita Trenbololone Recipe Kugadzira Trenbolone Enanthate Powder 2019
I10 Inonyanya Kufarirwa Anabolic Steroids Raws Material	Iko kusanzwisisika kusanzwisisika mune anabolic steroid yenyika